डब्ल्यूएचओको चे’तावनी : थुप्रै देशहरू गलत दिशातर्फ गइरहेका छन्, कोरोना महामारीकाे अझै खराब अवस्था आउँछ
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले सरकारहरूले थप निर्णायक कदमहरू चाल्न विफल भएमा कोरोना भाइरस महामारी खराबमाथि खराब हुँदै जाने चे’तावनी दिएको छ । डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले थुप्रै देशहरू गलत दिशातर्फ गइरहेको बताएका छन् । प्रमाणित उपायहरू नअपनाइएका वा नपछ्याइएका ठाउँमा संक्रमितहरू बढिरहेको उनले भनाई छ ।
सोमवार जिनिभामा बोल्दै डा. गेहब्रेयससले नेताहरूको मिश्रित सन्देशले उनीहरूले महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छन् भन्ने जनविश्वासलाई कमजोर पारेको बताएका छन् । उनले सामाजिक दूरी, हात धुने, आवश्यक ठाउँमा मास्क लगाउने जस्ता गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। निकट भविष्यमा पुरानो सामान्य अवस्था फर्कने देखिँदैन।
उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि आधारभूत कुरालाई पछ्याइएन भने यो महामारी जाने एउटै बाटो छ । त्यो भनेको खराब, खराब र खराब हुनु हो।’ उत्तर र दक्षिण अमेरिकी देशहरू यतिखेर महामारीको केन्द्रविन्दु बनेका छन् । डब्ल्यूएचओको आपत्कालीन सेवा सम्बन्धी निर्देशक डा. माइक रायनका अनुसार अमेरिकी देशहरूमा खुकुलो पारिएको लकडाउनका उपायले केही ठाउँमा व्यापक संक्रमण फैलाएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वचन/कर्मले सीमा नाघेकाे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले ‘नक्कली अयोध्या’ खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको बताएपछि नेता भट्टराईले यस्ताे टिप्पणी गरेका हुन् ।
भानुजयन्तीका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले ‘नक्कली अयोध्या’ खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको बताएका थिए । उनले भगवान् रामको राज्य अयोध्या नेपालको वीरगन्जभन्दा पश्चिममा पर्ने भए पनि भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेको बताएका थिए ।
समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीका वचन र कर्मले सीमा नाघेको बताउँदै अब उनलाई छाडा छोड्नु ख’तरनाक हुने टिप्पणी गरेका छन् । संसदमा ‘सिंहमेव जयते’ र बेसार-पुराणदेखि अयोध्या-पुराणसम्म आउँदा प्रधानमन्त्रीका चिन्तन प्रणाली स्वस्थ नदेखिएको पनि नेता भट्टराईले बताएका छन् ।